Banaan bax ka dhan ah Wargeyska Charlie Hebdo oo ka dhacay magaalada Boosaaso – Radio Muqdisho
Banaan bax ka dhan ah Wargeyska Charlie Hebdo oo ka dhacay magaalada Boosaaso
Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday af-lagaaddadii wargeyska Charlie Hebdo uu u geystay nabigeenna Muxammad (N.N.K.H) ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Isu soo baxaan ayaa waxaa ka qeybgalay culimaa’udiin iyo qeybaha kale ee bulshada, kuwaasi oo sitay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan Wargeyska Charlie Hebdo, waxaana ay isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso.
Qaar ka mid ah dadkii ka hadlay dibad baxa ayaa sheegay inay ka xunyihiin sawir-gacmeedkii lagu af-lagaadeeyay nabigeena Muxammed (N.N.K.H), iyagoo ugu baaqay umadaha Muslimiinta ah inay si wadajir dareenkooda uga muujiyaan gafka loo geystay nabigeena Muxammad (N.N.K.H), ayna sameeyaan dibad baxyo ka dhan ah Wargeyska Charlie Hebdo ee ka soo baxa dalka Faransiiska.
Dadkii ka hadlay dibad baxa ayaa yiri “Dibad baxaan waxa uu ka turjumayaa aflagaaddii uu wargeyska Charlie Hebdo u gesytay Nabigeenna Muxammaed (N.N.K.H), mana ogolaan doono in Wargeysyo lagu aflagaadeeyo Nabigeenna, mana u dulqaadan karno, teeda kale waan cambaareyneynaa dadkii ku taageeray in Wargeyska Charlie Hebdo uu aflagaado u geysto Nabigeenna Muxammad (NNKH)”.
Culimada Gobolka Bari ayaa dunida Islaamka , gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay u istaagaan sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan gafka loo geysey Nebi Muxammad (N.N.K.H).
Dibad baxyo kale oo lagu cambaareeyay af-lagaaddada lagula kacay nabi Muxammad (N.N.K.H) ayaa lagu qabtay Gobollada Benaadir, Baay, Galgaduud, Nugaal, Mudug, Bari iyo meelo kale, kuwaasi oo dadkii isugu soo baxay ay si wada jir ah u cambeereeyeen falkaasi.
Maamulka degmada Balcad oo agab isboorti guddoonsiiyay xiriirka kubadda cagta ee degmadaasi
Allaha u naxariisto Dr Xuseen Kadare oo ku geeriyooday Muqdisho